पोखरामा पाउलो फ्रेकोको चर्चा - NepalDut NepalDut
सिर्जनशील लोकतान्त्रिक प्रतिष्ठान पोखराको नियमित मासिक कार्यक्रमअन्तर्गत शनिबार पाउलो फ्रेको शैक्षिक दर्शनबारे चर्चा भएको छ ।
प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष सुरज पौडेलले ‘पाउलो फ्रेको शैक्षिक दर्शन र नेपालको शिक्षामा यसको प्रभाव’ शीर्षकको छलफल पत्रमा फ्रेले उपनिवेशकालीन ब्राजिलियन समाजको पृष्ठभूमिमा आलोचनात्मक सचेतना सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको बताए । उनले भने, नेपालमा भएको शैक्षिक विकासलाई पनि उनको दार्शनिक मान्यताबाट विश्लेषण गर्न सकिने सम्भावना पनि छ ।
छलफल पत्रमा प्राडा विष्णुप्रसाद पौडेल, डा.यमनाथ तिमिल्सिना, डा. जगन्नाथ रेग्मी, सुलोचना खनाल, सूर्यभक्त सिग्देल, केशवशरण पराजुली, विष्णु शर्मा, झलप्रसाद अधिकारी, पीताम्बर पौडेल, वसन्त पराजुली, भानुभक्त आचार्य र हिममाया पौडेलले टिप्पणी गरे ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. भूमिराज बस्ताकोटीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रम सञ्चालन सचिव डिल्लीराम पौडेलले गरेका थिए ।